रोमी नेइभबर्ग र सावनाह डेकेलर व्यवसायमा धेरै महत्त्वपूर्ण विकास! मार्टिन भिजल्याण्ड
चाल जब तपाईं चाहानुहुन्छ केहि कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्न र ध्यान दिनुहुन्छ जब ध्यान दिनुहुन्छ। उदाहरणका लागि, धेरै देशहरूमा यो एक राम्रो-भुक्तानी मार्केटिङ अभियान थियो कि खेल बढाउन थियो र खेल दिन भित्र एक प्रचार थियो यो याद छैन बनाएर, खेल Pokemon जाओ परिचय दुर्घटनामा लिङ्क द्वारा सक्षम थिए। प्रश्न थियो कि विश्वव्यापी रिपोर्ट दुर्घटनाहरू खेलकुद वा खेलकुद बजारको लागि चालाक तरिकाको कारण थियो। यसको लागि तपाईंले "मेकअप" दुर्घटनाहरू गर्नुपर्दछ। प्रश्न अब यो छ कि तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ कि मिडिया यस्तो कुरामा सक्षम छ। यसले तपाईंलाई कुनै कुरा गर्दैन। सही? तपाईं मुख्यधारा मिडिया पुरस्कार मानिसहरूलाई एक पकड राख्न trickery र छल प्रयोग गर्न शासकहरू जो सल्लाह एक प्रसिद्ध लेखक पछि नाम पढ्न सम्म। उहाँको नाम थियो निकोलोलो मशीयाली। यसले तपाईंलाई सोच्दछ। मिडिया सूची र छलले कुन उद्देश्यको प्रश्न लागू गर्न सक्दछ, यसैले Machiavelli लाई त्यो पुरस्कारको उल्लेखमा पाउन सकिन्छ: 'जनसंख्यामा पकड राख्नको लागी'। त्यसकारण तिनीहरू मक्वीलेलीमा भए तापनि सामरिक मार्केटिङ, ट्रिकरी र धोका दिने शक्तिलाई प्रयोग गर्न सक्दछन्। त्यस पुरस्कारको नाममा मानिस नामको नाममा राखिएको छ र तपाईं आश्चर्यचकित हुनुहुन्छ कि यो Machiavelli सिद्धान्त रोमानी र Savannah मामलामा लागू गरिएको छ।
जहाँ उल्लेख गर्न पोकमोन जानु धेरै महत्त्वपूर्ण थियो, यो संकेत छ कि मानिसहरु को सजिलै संग एक को माध्यम ले सजिलै संग ल्याइन्छ augmented वास्तविकता खेल। रोमी र सावनाह मामलामा पनि हामीले देख्यौं कि धेरै मानिसहरू उनीहरूको खुट्टामा ल्याउन सक्थे। सभानाको हराएको समयमा सभना डेकरको आमाबाट सोशल मिडियामा कल गरेर यो समय, जब बुबा डेककरको बारेमा चिन्ता थियो मैनहोल आवरण बारबेक्यू। "तर मिडियाले यसमा भूमिका खेल्दैन"तपाई अब भन्न चाहानुहुन्छ। खैर, जब यस स्थिति मा ट्रिकरी र धोखा को खेल दाव छ, मुख्य क्यारेक्टर राज्य र मीडिया संग सहयोग मा खेल खेलिन्छ। के तपाईं सोच्नुहुन्छ कि धेरै टाढा छ? खैर, परिणामहरू हेर्नुहोस्।
मेरो फेसबुक समयरेखामा 15 जूनमा पहिले नै व्यक्त गरिएको साजिशको मेरो परिकल्पना:
हामीले अनुसन्धानमा मिति हेरेका छौं? सुरु गर्नका लागि, हामीले धेरै भावना देखेका छौं - मिडिया अभिव्यक्ति उत्तेजित गर्दछौं। हामीसँग छ महंगे मजाकहरू दुबै केटीहरूको सेतोमा (किन सेतो?); जसको 1 पनि गाडी संग। दुर्व्यवहार पछि दुलही एउटै हातमा रहेको छ (*) र दुबै अवस्थामा रहेका आमाबाबुले देख्न नसकिने भावना देखाउँदैनन् वा न त तिनीहरू मिडियामा देखिन्छन्। तथापि, रोमी नेइभबर्गको आमाले मलाई अन्तिम संस्कारको दिन मलाई ईमेल गर्न र रोमीबाट रोमीबाट आइडीलाई ईन्टरनेट पठाउनुभयो। त्यो उल्लेखनीय भनिन्छ, किनकि उनी उनको बारे मा यस्तो क्षणिक क्षणमा चिन्ता गर्दछन्। हामीले एउटी क्षेत्र र एउटै उमेरमा ती केटीहरूमा हत्या गरेको घटनाको लागि धेरै छिटो अन्त्य गरेका छौं। NFI लाई दिएर एक क्षणको लागि निकायहरू हेर्न नचाहनु पर्दछ नोडो प्रोटोकल?
यद्यपि पीटर आर डी देरीज र जॉन वान डेन ह्युवलले अनुसन्धानका लागि बुझेका थिए कि चीजहरू एकअर्कासँग केहि गर्न सकेनन् र दुई अनुसन्धान टोली गठन भएको थियो, यो निष्कर्षमा पुग्यो कि पुलिस र न्यायपालिकाका गल्तीहरू मास्क गर्नु पर्छ। हामीले धेरै गल्तीहरू देख्यौं। अभियोजकले सावनाहको टेलिफोन गेज गर्न अनुमति दिएको हुन सक्छ। यो कारणले शुक्रवार दोपहरमा रोमी (एक्सएनएनएक्सएक्स वर्ष) को मृत्यु भएको थियो र सावनाह (पनि 14 वर्ष) हराइरहेको थियो। यद्यपि सावनाह उस समय मरेका थिएनन्, तर मात्र हराइरहेको, उमेर र छोलेभेन र बन्सस्कोटनको बीचको छोटो दूरी तुरुन्तै अम्बर अलर्ट गर्नै पर्छ; फोनको सर्वेक्षणमा तुरुन्तै र यस प्रकारको अनुसार थियो RTL पुनर्निर्माण यो सावनाह अझै अनलाइन थियो भनेर स्पष्ट हुनुपर्छ। त्यसोभए यो हेलीकाप्टरमा लक्षित गरिएको थियो (सँग FLIR क्यामेरा) र खोज कुत्तों को डीड्रोकेल्स औद्योगिक क्षेत्र मा खोज्नु पर्छ। तथ्य यो हो कि होइन कि केहि कुरा सही छैन भनेर संकेत गर्दछ। र एक अर्ध महिना पछि के गर्ने जाँदैछ? ditch dredges। निस्सन्देह यो थियो परिणाम तिनीहरूका।
यद्यपि मिडियाले उनीहरूको सबै भन्दा राम्रो काम गर्छ कि कुराहरु एकअर्कासँग केहि गर्ने छैन र तिनीहरू दुई मुद्दाहरू बिभिन्न रूपमा छलफल गर्न जारी राख्छन्, यसले 'हानि नियन्त्रण' गर्न सक्छ। मानिसहरू बीचमा धेरै थोरै थियो, जसले मार्टिन भिज्जल्याण्डको साइटमा सम्भव सम्भावनाको बारेमा चिन्ता गरे। त्यसैले यो मामला अब डाउनप्ल गरिएको छ। तपाईं स्पष्ट गल्तिहरु मास्क गरेर आवश्यक ढिलाइ संग छलफल र यो राम्रो तरिकाले तिनीहरूलाई मोटाई मा हराएर यो सबै भन्दा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं पनि Savannah डेकलर को रोमानिया को स्वतंत्र रूप देखि रोमी Nieuwburg को मामला मा चर्चा गर्न को कोशिश पनि, ताकि यो एक जस्तै संग केहि गर्न को लागी जस्तो देखिन्छ।
"तर अपराधीहरूलाई पक्राउ गरिएको छ र रोमीको हत्यारालाई थाहा छ?"हो, यो कथा हो कि मिडिया तपाईले ल्याउनुहुन्छ। तपाईं Machiavelli मा फिर्ता सोच्नुहुन्छ? रोमीको हत्या गर्ने केटाको सम्पूर्ण कथा उदाहरणका लागि एक पूर्ण मजाक हो। एउटा छवि सिर्जना भएको थियो कि यस हत्याको इतिहास हुनेछ। केटा (सम्भवतः ब्रायन निजहोफ) एक मनोविज्ञान र निर्दोष स्टिकर थियो, जो शारीरिक रूपले धेरै बलियो थियो र पछि कुनै भावना देखाउन सकेनन्। त्यो कहानी संग बनाईएको तस्वीर हो। यो निस्सन्देह, अहिलेसम्म एक कथा छ। कुनै प्रमाण देखाइएको छैन; तपाईं मात्र कथित खोजकर्ता र आरोपित अपराधीको बारेमा भनिएको छ। त्यो कुनै प्रमाण छैन। वास्तवमा; मैले स्पेसमा बनाएको अवलोकनले यसको सम्पूर्णतामा विरोध गर्दछ। आइस क्रीम बिक्रेताले केटालाई देख्न सकेन र हेरचाह किसानले केहि भन्न सक्दैनन्। हामी केहि पनि थाहा छैन। सबै केहि पनि छैन। यो केवल एक कथा हो जुन संदिग्ध हुनेछ भनेर संदिग्ध हुन्छ। सम्पूर्ण विश्लेषण पढ्नुहोस् यो लेख। Netflix श्रृंखला 'एक हत्यारा बनाउने' देखेको छ जसले कसैलाई सजिलै संग अपराधी आविष्कार गर्न वा वास्तवमा एक वास्तविक वा अपराधी हुन बिना बनाउन सक्छ भनेर सोच्न सक्छ। रेल उत्साहीको बारेमा कथा एन्जेलो सोर्स Giroto बस को रूप मा उल्लेखनीय छ र RTL पुनर्निर्माण विश्लेषण को लायक छ। त्यो पढ्नुहोस् यहाँ फेरि फेरि।
मेरो परिकल्पना 15 जुन मा, म Machiavelli सिद्धान्त पनि यो मामला मा लागू हुन सक्छ भन्ने र हामी trickery र छल संग काम गर्दै छन् कि एक विशेष लक्ष्य हासिल गर्न। यसबाट मैले भनेँ कि यो 'समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान': तपाई एक समस्या सिर्जना गर्नुहोला, ब्यबसाय मार्फत मानिसहरु बीच अनुमानित र समन्वित प्रतिक्रियाको प्रतीक्षा गर्नुहोस् र त्यसपछि आफैलाई समाधान सम्म पुग्नुहोस्। यो समाधान प्राय: एक समाधान हो जसले सबै नागरिकहरूको स्वतन्त्रतालाई असर गर्छ र थप गोपनीयता सुरक्षा हटाउँछ। यद्यपि, किनभने समस्याले समस्याको सामना गर्नुपर्दछ (जुन तपाईले गोप्य रूपमा आफैलाई सिर्जना गर्नुभयो), उनीहरूले समाधान पाउनेछन् (जुन वास्तवमा खुल्ला हतियारको साथ सबैको लागि खराब छ)। र यो हप्ता के हो? यो समाधान खुला थियो र नयाँ कानूनको रूपमा उजागर गरियो। एनओएसको वेबसाइट रिपोर्ट गरियो अन्तिम बुधबार [उद्धरण]
लापता व्यक्तिहरूलाई ट्रयाक गर्न अधिक सम्भावनाहरू पुलिस
लापता व्यक्तिहरूलाई ट्रयाक गर्न प्रहरीले थप अवसर पाउनेछ। डेटा तिनको डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन वा सार्वजनिक ट्राफिक चिप कार्डबाट पुनः प्राप्त गर्न सकिन्छ। प्रहरीले एयरलाइन्स र क्यामेरा तस्वीरहरु को विवरण मा पनि जाँच गर्न सक्छ जसमा हराएको पुरुष वा महिला हेर्न सकिन्छ।
एक मा बिल मंत्री ब्लक भन्छन् कि प्रहरी र सार्वजनिक अभियुक्त, विशेष गरी पहिलो महत्वपूर्ण चरणमा यदि कसैले हराएको छ भने, थप खोजी खोजी विधिहरू पाउनेछ। हालत एक असाधारण मामला हो कि; यदि कोही आफैलाई खतरा हो वा खतरामा छ। उदाहरणका लागि, यसले व्यक्तिहरूलाई आत्महत्या गर्न चाहान्छ वा वृद्ध व्यक्तिहरूलाई धारण गर्न चाहन्छ।
खोजी उपकरणहरू पनि "आवश्यक र आनुपातिक" हो भने कम उमेरका किशोरहरू वा मानसिक विकलांगहरूसँग कमजोर व्यक्तिहरू चाँडै बस्न सक्छन्। तिनीहरू प्रयोग भएन भने हराएको व्यक्ति स्वैच्छिक रूपमा छोडेको छ वा अपराधको शिकार हो। यदि त्यहाँ अपराध हो भने सामान्य आपराधिक अनुसन्धान नियम लागू हुन्छ।
प्रहरीले चाँडै लापता व्यक्तिको कार पार्किंगमा खोज्न सक्दछ, वा एक व्यक्तिको घरमा पासपोर्ट वा डायरी खोजी गर्न प्रविष्ट गर्नुहोस्। अनुसन्धान पनि गर्न सकिन्छ, उदाहरणका लागि, एक हराएको मोबाइल फोन, ल्याप्टप वा USB स्टिक। एक ट्याप हराइरहेको व्यक्तिको टेलिफोनमा राखिएको हुन सक्छ।
त्यो धेरै राम्रो छैन। तपाइँलाई पनि यो आवश्यक छ, किनकी तपाईंले हालै धेरै सन्देशहरू पढ्नु भएको छ। एक भ्रष्ट व्यक्ति जसले आफ्नो भारी गर्भवती पूर्वलाई मार्नु पर्यो; 14 को दुई केटीहरु लाई कमजोर गरीएको केटाकेटीहरु द्वारा हत्या गरिएको थियो। जस्तै मैले भने: मामम 'समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान'तपाईले समाधान पुर्याउनुभएको समस्याहरू देखेका छन् किनकी तपाईं समाधान पूर्ण रुपमा गल्ती गर्नुहुनेछ। तर यदि तपाईं समस्याहरूमा नजिकको कुरा लिनुहुन्छ र पत्ता लगाउनुहुन्छ कि मेचीवालीका सिद्धान्तहरू लागू हुन सक्दछ, यी उपायहरू सबैको लागि गोपनीयताको उल्लङ्घन गर्दैनन्? के तपाईंलाई थाहा छ कि यो सबै कुरा हो? त्यो सार्वजनिक अभियोगकर्ताको कुनै कागजात पार्किंगमा तपाईंको कार खोजी गर्न आवश्यक छ; जुन प्रहरीले तपाइँको कारमा हेर्न सक्दछ र हरेक ठाउँ हेर्न सक्दछ। यो पनि मतलब छ कि पुलिस केवल घर संग सिंगल संग प्रवेश गर्न सक्छ र घर खोज्न सक्छ। अरे, तिमी एक्लो छैनौ। या तिमी पहिले, एउटा खोज वारंट देखाइएको थियो; त्यो अहिले अब आवश्यक छैन। प्रहरीले तपाईको डायरीलाई आधिकारिक कागजात बिना हेर्न सक्छ। त्यसकारण प्रहरीले तपाइँको ल्यापटप, टेलिफोन वा USB स्टिकहरू र कुनै पनि बाध्य बिना बिना हेर्न सक्छ। अधिक र अधिक गोपनीयता सीमा हटाइयो! तर चिन्ता नगर्नुहोस्: "तपाईंसँग लुकाउन केही छैन!"सही छैन? समस्या, प्रतिक्रिया, समाधान! के यो समयको लागि "पागल साजिश विचारक" मार्टिन व्रिजल्याण्डको लागि होइन (जो अनलाइन ब्ल्याक गरिएको छ) सरकारबाट) गम्भीरतापूर्वक लिने?
स्रोत लिङ्क सूची: nos.nl, nos.nl, fomat.nl
* तापनि आधिकारिक सूचना अन्त्येष्टि Romy Nieuwburg अनुसार अन्त्येष्टि निर्देशक Wim वैन डे Veen र साभान्नाह डेक्कर को दफन द्वारा Begrafenisverzorging भ्यान Asselt द्वारा प्रदान गरिएको थियो, यो नै हात पछाडि थियो जस्तै देखिन्थे। कालोरहरू प्राय: कालो कारहरूसँग कालीमा लुगा लगाइन्छन्। दुवै अवस्थामा, सेतो यहाँ चुनेको थियो।
ट्याग: ज्ञात, ब्रेक, डिकर, ड्रेडिङ, नाली, en, विशेष, न्याय, अन्तिम, हत्या, हत्यारे, नेइभबर्ग, समाचार, अनुसन्धान, विकास, राजनीति, परिणाम, परिणामहरू, Romy, साभान्नाह, ऋण, बन्द, संदिग्ध, संदिग्ध
23 जुलाई 2017 मा 11: 21
तपाईं तुरुन्तै तपाईं षड्यन्त्र संग कमाउन चाहनुहुन्छ र unconscionable छन् नभएसम्म जहाँ केही षडयंत्र संगठित छ हेर्न कलेज जाने छैन, हो तपाईं एक वकील हो, वकील, रूपमा छोटकरीमा भित्र गोली ????
साजिश बनाइयो र अन्रावेलर / सल्वर (तारा) तपाई हो, आविष्कारक होइन। एक मेसिन बनाइएको छ र धेरै टेक्नोलोजी सजिलै समावेश छ, जस्तै एक प्लटमा धेरै परिष्कृत हुन्छ।
त्यसैले मूलतः मिडिया / राज्य / राजनीतिक षडयंत्र यसलाई खोजी र तिनीहरूले फेला पारेका छौं के पारित छन् आशा, को "आविष्कार" छ कि विचारक र एक हामी massal लिएको काटन भनेर देख्नुहुन्छ गर्ने, कुनै (हुन) ।
23 जुलाई 2017 मा 12: 45
मलाई बिल थाहा छैन। यो महत्वपूर्ण छ
कसले निर्धारित गर्दछ र जब यो निर्धारण गरिन्छ कि कसैले हराएको छ कि छैन। मापदण्ड के हो? र कुन समयमा।
सबै पछि, कारले के अर्थ छ कि केही समय (केहि सम्बन्धी शब्द) कार पार्क गरिएको छ भन्ने ठाउँमा पार्क गरिएको छ?
र के अनुसन्धान विधिहरू पहिले नै सम्भव छ? खतरनाक छ कि यो व्यवस्था स्पष्ट अन्य उद्देश्यका लागि प्रयोग गरिनेछ। विशेष गरी यदि कुनै आधिकारिक रिपोर्ट यो बनाइएको हो वा रेकर्ड अन्वेषण। यसको अतिरिक्त, खोजी सेवा र न्याय कसले नियन्त्रण गर्छ?
23 जुलाई 2017 मा 13: 03
यो तथ्यलाई तल दिइएको छ जुन यसलाई अनुमति दिइएको छ र त्यहाँ केही प्रतिबन्धहरू छैनन्। पोइन्ट
23 जुलाई 2017 मा 15: 23
हामी आफैलाई सोध्नु पर्छ कि त्यहाँ सधै स्वतन्त्रता छ र यो सबै सुन्दर सुन्दरता छैन। । 'सांसदहरु' भनिन्छ तथाकथित। राजनीतिक प्रणाली म्यान्डेट को परिचय (मार्फत चुनाव) राजनीतिज्ञ झूठ आउन देखि फिर्ता अन्य शब्दहरू मा अभिजात वर्ग आफ्नो छिमेकी मा शपथ लिन, तपाईं फेरि दूर चुनाव गर्न दिन कि "आवाज" तपाईंको बाकी स्वतन्त्रताहरू हटाउनका लागि तपाइँका सबै प्रकारका उपायहरू शुरू गर्न प्रयोग गर्दछन्। दृष्टि बाहिर अभिजात वर्ग, नेताओं यस्तो (अधिकारीहरु) उपाय बाहिर र सार्वजनिक बिल हुन्छ। यो नव-साम्राज्य प्रणाली जस्तै गंध ...
यस अवस्थामा, सुन्तला ब्लक ओरेन्ज पार्टीबाट मायालु ढंगले कार्यान्वयन गर्दैछ:
23 जुलाई 2017 मा 15: 46
डेमोक्रेसीले व्याख्या गरे:
डच शब्द  ग्रीक शब्दहरु δῆμος (dèmos), "मान्छे" र κρατέω (krateo), "शासन गर्न शासन" बाट प्राप्त हुन्छ, ताकि मान्छे शासन गर्न।
23 जुलाई 2017 मा 16: 23
23 जुलाई 2017 मा 18: 12
हामी एक लोकतन्त्रमा बाँच्दैनौं:
1। राजा र रानी चुनावको माध्यमबाट सत्तामा आएन। अन्य नागरिकहरू कलाको सन्दर्भमा राजा बन्न सक्षम हुनु पर्दछ। 1 संविधान वा राष्ट्रपतिको लागि शायद समय? त्यो अब सम्भव छैन।
2। स्थानीय सरकारलाई जाँच गर्न को लागी मेयर नियुक्त गरिएको छ।
3। निर्वाचनको सट्टा अधिकारीहरू नियुक्त हुन्छन्
4। नीदरल्याण्डका कानुनहरू संविधानको विरुद्ध परीक्षण गर्न सकिँदैन
5। संसदका सदस्यहरू आफ्नै पार्टीद्वारा सूचीमा राखिन्छन्। र कसले नियन्त्रण गर्छ / पार्टी? MEPs आउँछ र पार्टी बाघहरूमा जानुहोस्।
आदि छोटोमा, सबै बोबनिक स्थितिको पक्षमा।
23 जुलाई 2017 मा 22: 09
नमस्ते मार्टिन, यस विषयमा तपाईंको सबै अनुसन्धानको लागि धन्यवाद। म बाहिर निस्कन चाहन्छु, तथापि, कि NODO प्रक्रियाले अस्थायी रुपमा मात्र लागू गर्दछ: 2012-2013। 2016 बाट एक फरक योजना हो, NODOK योजना, जुन फरक तरिकाले डिजाईन गरिएको छ र विशेष गरी आमाबाबुको लागि आफ्नो बच्चाको मृत्यु ट्रेस गर्न चाहन्छ।
उदाहरणको लागि NODO प्रक्रियाको असफलता हेर्नुहोस्:
र NODOK योजनाको बारेमा:
23 जुलाई 2017 मा 22: 42
नोडो वा नोकोक कुरा गर्दैन
यदि तपाइँ रिश्तेदार हुनुहुन्न भने, तपाईले यो मामलामा हस्तक्षेप गर्नुपर्दैन, तपाईलाई एक पारिवारिक रुपमा हुनुपर्दछ।
र त्यसोभए, अक्सर यो हुन्छ कि भाग्य बारेमा एक संदेह हुँदा पारिवारिक घर पनि पठाइन्छ।https://www.rtlnieuws.nl/editienl/marijke-kan-zich-niet-neerleggen-bij-officiele-doodsoorzaak-zoon-ik-blijf-vechten
त्यसोभए काल्पनिक आमाबाबुले गलत भाग्यको मामलामा अवस्थित हुन सक्दछ र हाम्रो नागरिकहरु लाई पत्ता लगाईएको छ, श्रिडर। अन्तले ती प्रकारका बेपत्ता व्यक्तिहरूलाई सबै माध्यमलाई औचित्य दिन्छ
24 जुलाई 2017 मा 05: 45
कस्तो कुरा हो कि केटीहरू धेरै छिटो दफन गरिएका छन्।
24 जुलाई 2017 मा 06: 24
@Camera @Martin म पूर्णतया तपाईंसँग सहमत छु; पूरक को लागी केवल पूरक को लागि दिए।
24 जुलाई 2017 मा 10: 35
मैले बुझें .. यसको लागि धन्यवाद
« भारी गर्भवती मित्रमा टि्युनिस हलिउडको हत्याले हामीलाई सोच्दछ
एम्स्टर्डम लिङ्ग-तटस्थ भाषण आधारित सोचको साथ सुरु हुन्छ »
कुल भ्रमण: 4.181.266